Dagaalka Galgala oo galay maalintii 3-aad iyo Gaas oo guulo sheegtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa maanta maalintii 3-aad galaya dagaal u dhaxeeya ciidamada Puntland oo garab ka helaya dal ajnabi ah oo aan magaciisa la shaacin iyo Alshabaabka buuraleyda Galgala.
Dagaalka maalmahaan dhacay ayaa la sheegay in la isu adeegsaday hub culus, iyadoo la sheegay in Alshabaab doonayaan iney iska difaacaan ciidamada Puntland oo ugu tegay deegaano horleh.
Madaxwaynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Shir jaraa’id oo uu ku qabtay Aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe ku xaqiijiyey in uu bilowday wajigii labaad ee dagaalka uu maamulkiisu kula jiro Ururka Al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuralayda Galgala .
Gaas ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay dagaalkaan ku soo hoyeen guul oo ay dhabar jab xoogan gaarsiiyeen Al-shabaab “Waxaa ay ciidamadu cadowga ka dileen 34 halka ay ka dhaawaceen 17, waxaana ay ka gubeen laba mootar oo mid uu yahay kan loo yaqaan 82 midna uu yahay 62” ayauu yiri Gaas oo warbaahinta la hadlay.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in dagaalki dhacay 27 ilaa 29-kii bishii hore uu ciidamada Puntland wax dhimasho iyo dhaawactoona ka soo gaarin, isagoo xusay iney dagaalkaas ku qabsadeen saldhigyo horleh oo ay samaysteen Al-shabaab, waxaana kamid ah sida uu yiri saldhigyadaasi Madarshoon iyo sidookale meesha la yiraahdo Dhagax-dhaabur.
“Dabadeed ciidamadu horay ayey u socdeen 3-dii bishaan ilaa maanta ayaa dagaalkii labaad bilowday, dagaalkaas ciidamadu waxa ay ku qabsadeen dhulkale oo tiro badan oo ay kamid tahay meesha Guri-xoor, Dhagax dheer, Guri dharkeyn, Guri xiis, Karin Xagarood iyo saldhigii ugu dambeeyey ee Din-digle’’Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
‘’Dagaalkaas cadowga waxaa kaga dhintay 20, waxayna ciidanku ka dhaawaceen 29, ciidamada geesiyada Puntland dagaalkaasi waxaa kaga shahiiday 5-askari, waxaana ka dhaawacmay 4-askari, waxayna ku qabsadeen ciidamadu qalab tiro badan oo ay lahaayen burcad diimeedka Al-shabaab kana mid ahaayeen raadiyaasha ciidamada, firxadkoodina waxa ay u baxsadeen Gobolada waqooyi ee soomaaliya’’ ayuu sidoo kale yiri Madaxweyne Gaas.
‘’Dagaalkaasi sidoo kale waxa ay ciidamadu ku qabteen masuuliyiin waaweyn oo katirsan kooxdaasi Al-shabaab oo uu kamid yahay ninka layiraahdo Mukhtaar Cabdinuur Axmed kuna magac dheer Axmed Guray kana mid ahaa nimankii ugu cuslaa dhanka dagaal gelinta waxaa isna kamid ah ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Maxamed oo isna kamid ah masuuliyiinta ugu waaweyn saraakiishaasi iyo kuwo kale oo waaweynba ciidanku gacanta ayey ku hayaan’’Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
Gaas ayaa ugu baaqay Alshabaab iney isu soo dhiibaan maamulkiisa, wuxuuna yiri ”Waxaan Rajaynayaa in firxadka kooxdaasi ay ka faa’iidaystaan Fursadaan, badbaadiyaana Noloshooda iyo aayahooda isuna soo dhiibaan Ciidamada Dowladda Puntland Meelkasta oo ay joogaan”.
Warar laga helayo deegaanada dagaallau ka dhaceen ayaa sheegaya iney dagaalka hadda socda ay ka qeybqaateen diyaarado dagaal oo ay leeyihiin qaar ka mid ah dalalka Galbeedka, hase ahaatee waxaa arrintaas beeniyey madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Gaas.
Qaar ka mid ah warbaahinta ka shaqeeyaa deegaanada Puntland ayaa sheegay in dagaalka ay weyb ka tahay dowlad weyn oo ka mid ah dalalka Soomaaliya ka saacida la dagaallanka Alshabaab. Ururka Alshabaab ayaa horay u sheegay in dagaalka Galgala ay ka qeyb qaateen ciidamo Mareykan ah.
Ma jiro wax war ah oo weli Alshabaab kasoo saareen dagaalka maalintii 3-aad galay ee ka socda buuraha Golis.